Kolontsaina rock : Mpitendry 5 hiatrika ny famaranana mitendry gitara -
AccueilVaovao SamihafaKolontsaina rock : Mpitendry 5 hiatrika ny famaranana mitendry gitara
Kolontsaina rock : Mpitendry 5 hiatrika ny famaranana mitendry gitara
12/03/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
guitare talent 2017
Ao anatin’ny fampiroboroboana ny kolontsaina, indrindra ny rock. Mpitendry 5 no hiatrika nyfamaranana amin’ilay fifaninanana mitendry gitara « Grande-Ile Guitares Talents 2017». Fifaninanana nokarakarain’ilay mpitendry frantsay malaza Marc Demelemester, izay tsy iza fa mpitendrin’i Johnny Hallyday. Etsy amin’ny alliance française Andavamamba no hanaovana ny famaranana ny sabotsy 24 marsa ho avy izao manomboka amin’ny 6 ora sy sasany hariva.
Namiratra nandritra ny dingan’ny fifantenana tamin’ny fifaninanana ireo mpitendry 5 ireo ahitana an’i Anjara, Herisetra, Jaykee, Misaina ary Tamby. Mandritra io seho io araka izany no hitsarana izay mendrika sy hibata ny loka sy ny amboara. Gitara iray marika « Fender » izay nosoniavin’ilay mpitendry kalaza Jimy Hendrix, miaraka amin’ny fampisehoana mitety faritra eto Madagasikara ny loka miandry azy ireo. Mialoha io famaranana io anefa, dia mbola hisy ny seho fanazarana ataon’izy 5 mirahalahy ireo etsy amin’ny kudéta Anosy sy eny amin’ny Is’art Galerie, eny Ampasanimalo. Mandritra izany no hizaran’izy ireo ny fahaizana miseho an-tsehatra sy ny fahaizana mamorona haingana sy tsy ampoizina eny an-tsehatra. Tafiditra amin’ny fepetra hitsarana ireo mpifaninana rahateo izany. Ankoatra an’i Marc Demelemester, mpikarakara ny fifaninanana, dia hanampy azy hitsara amin’ny famoahana ny anaran’ny mendrika sy izay ho mpandresy ihany koa, ilay mpitendry gitara malagasy manana ny lazany, Edgard Ravahatra.
Tsiahivina fa ny volana aogositra 2017 no nifarana ny fisoratana anarana tamin’ity fifaninanana mitendry gitara ity, ary an-jatony ireo nisoratra anarana tamin’izany nefa dia izy 5 mirahalahy ireto no voafantina hiatrika ny famaranana.
Tetikasa goavana ny lalambe eto an-drenivohitra ilay antsoina hoe “Fly Over”. Tafiditra indrindra amin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena izy io, izay lalambe mifanaingina ambony ambany, ohatra ireny any ivelany ireny ny endriny. Raha ny fanazavana, ny minisitera ...Tohiny
Trafika-na « bois de rose » : 100 Miliara fmg indray